Shan oo qofood ee ku British ayaa qabo neef, ay ku jiraan milyan carruur ah. Labadiiba ee carruur neef ayaa neefta joogsan doono arkii, laakin ku soo doonto markii waynaadaan that is noqon. Calaamadaha neefta waxaa ka mid ah neefsasho la'aan, xabadka oo adkaado (neefta kugu dhegto), xiiqlayn iyo qufacid (gaar ahaan habeenkii). Ah waxayna karaan lix ilaa iyo saacadood ay xumaadaan. Qayb mid oh daawaynta neeftaada ogaashada calaamadahaaga yahiin ka qaadidda loo joojiyo inay si xumaadaan. Neefta ma lahan hal u ah ee keeno, waxaa jiro kala duwan ee tabarruuci cudurka that is kugu that is inuu.
Next Next post: ﻿top 25 Photo Studio Manager Profiles In Greater New York City Region